လူတန်းစား ခွဲ သတဲ့လား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Cultures » လူတန်းစား ခွဲ သတဲ့လား	21
လူတန်းစား ခွဲ သတဲ့လား
Posted by မြစပဲရိုး on Jul 3, 2015 in Cultures | 21 comments
သူကြီးမင်း ရဲ့ “အင်္ဂလိပ်တိုင်းပြည် မှာနေသူများ လူမျိုးကြီးစိတ်ကြောင့် လူတန်းစား ခွဲကောင်းခွဲမယ်ထင်တယ်.” ဆိုတဲ့ မှတ်ချက် ကို တွေ့လိုက်ပါတယ်။ (မမ ရဲ့ ငါးခြောက်ထမင်းကြော် Post)
နဲနဲရှည်မှာမို့ လို့ လည်းကောင်း၊ နှစ်ရာရချင်၍ လည်းကောင်း ပို့စ် အဖြစ် တင်လိုက်ပါတယ်။
သူကြီး ကို မေးခွန်း တစ်ခု အရင် မေးချင်ပါတယ်။
မှန်မှန် ကန်ကန် အခွန်ထမ်း ရသည့် တိုင်းပြည် တွေမှာ လူတန်းစား မခွဲလို့ တကယ်ဘဲရလား?
တိုင်ပြည်က အခွန်ပေးသူ တွေဟာ ဝင်ငွေပေါ်တည်ပြီး အခွန်ထမ်းရတာပါ။
ဒီတော့ အခွန်များများဆောင်ရတဲ့ လူတန်းစား၊ သာမာန်ဆောင်ရတဲ့လူတန်းစား၊ လုံးဝ မဆောင်ရတဲ့လူတန်းစား ကွဲ သွားပါတယ်။
တစ်ချို့သော တော်တော်များများ က အလုပ်မလုပ်ဘဲ အခွန်ဆောင်သူလူတန်းစား ရဲ့ အခွန်ငွေ ကို အညွန့်ခူးစား ပါတယ်။
တစ်ချို့ကတော့ လစာ နည်းလို့ အခွန်ပေးရန်မလို ကြတာလဲ ရှိပေါ့။
အဲဒီလိုသူတွေ ကို အစိုးရက ထောက်ပံ့ ရပါတယ်။
. ထောက်ပံ့မှု ယူပြီး အညွန့်ခူးစား နိုင်ဖို့ ဆင်းရဲသားအဖြစ်ခံကြတာ၊ ဒုက္ခိတ အဖြစ်နေကြတာ မနည်းပါဘူး။
ထိုသူများအတွက် ကလေးများ ကျောင်းစရိတ် လဲ မပူရ။
စားစရိတ် ကိုလဲ အစိုးရ က အပါတ်စဉ်ပေး တာမို့ ကလေးများ လေ ပိုကိုက်လေ ၊ ကလေး တွေ အများကြီး မွေးကြတော့တာ။
အလုပ်မလုပ်ပေမဲ့ အစိုးရ စီစဉ်ပေးတဲ့ အိမ်ကြီးကြီး နဲ့ နေနိုင်သေး။
အဲဒီ တစ်ချို့က သာမာန် အလုပ်လုပ်သူလူတန်းစား ထက် ပိုပြီး သုံးစွဲနိုင်ကြ တာပါ။
Junk Food လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ ပျော်ပျော်ကြီး စားနိုင်ကြပါတယ်။
သူတို့ကိုယ်ကို ဆင်းရဲသား လို့ ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူပြီး အသတ်မှတ်ခံကြတာပါဘဲ။
ကုသိုလ်ကံထူး ကြတယ်တောင် ပြောရမလားဘဲ။
Wiki ထဲ က အဆိုအရ
ဆင်းရဲသားလူတန်းစား ကို Lower class (သို့) Working class လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
blue-collar workers နဲ့ အလုပ်လက်မဲ့တွေ၊ အိုးအိမ်မဲ့တွေ ပါမယ်။
အထက်တက်လိုက်ရင် Middle class လူတန်းစားကို တွေ့ပါ့မယ်။
အခွန်ထမ်း လူတန်းစား ဖြစ်လို့ “white-collar workers” လို့ ခေါ်နိုင်တယ်။
ပညာ အရည်အချင်းမြင့်ပြီး ဝင်ငွေကောင်း ချမ်းသာကြွယ်ဝ သူများ ကို Upper middle class ခေါ်နိုင်ပြီး သင့်တင့်သောပညာ ရှိပြီး ဝင်ငွေ သာမာန်ရှိသူများ ကို Middle/Lower middle class ခေါ်နိုင်မလားဘဲ။
အဲဒီ ကနေ တစ်ဆင့်တက်ကြည့်တော့ Upper class ကို မြင်နိုင်ပါမယ်။
မင်းမျိုး မင်းနွယ်များ၊ မြေပိုင်ရှင်ကြီးများ၊ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ချမ်းသာသူ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ ဖြစ်သည်ပေါ့။
ထိုသူများ ကတော့ အနည်းစု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Research တွေ အရ အဲဒီလို Class ကွဲ ခြင်းပေါ် လိုက်ပြီး သူတို့၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး အခြေအနေတွေ ကွဲပြားကြတယ် ဆိုကြပါတယ်။
. လောလောဆယ် ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ရတာတွေ ကို ပြောရရင်
. ဆေးလိပ်သောက်သူ ဆိုတာ ဒီနေ့အချိန် Lower class များတွင်သာ အများစုရှိ ပါတော့တယ်။
သာမာန် ရုံးဝန်ထမ်း များထဲ မှာတောင် ဆေးလိပ်ကို ရုံးအဆောက်အဦ အပြင်ထွက်သောက်ရသောကြောင့် တော်ရုံ စွဲ သူများ အလိုလို ပြတ်ကုန်တယ်လို့ ဆိုတယ်။
Middle class များ သည် ဘီယာ အရက် ဆိုင်များ သွားတာထက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား မှု တွေကို ပိုလုပ်လာကြ တယ်။
အစားစားရာမှာလဲ တွေထက် အသီးအရွက် လပ်လပ်ဆပ်ဆပ်တွေကို ပို စားလာကြတယ်။
ဆန် ကို အဖြူ ပေါ်ဆန်းမွှေး ထက် ငစိန်လို ဆန်လုံးညို များ စားလာတယ်။
အဆီ များ ရှောင်ကြတယ်။
အချို စားလွန်းရင် ကျန်းမာရေး အသိ မရှိ လို့ အထင်ခံရမှာမို့ ကြိုက်ရင်တောင်မှ သကြားမပါ ကော်ဖီ၊ လ္ဘက်ရည်များ သောက်ကြတော့တယ်။
အဲဒီ အချက်တွေကြောင့် ဒီမှာရှိတဲ့ Junk food ဆိုင်တွေမှာ Healthy Menu ဆိုပြီးဟု ထပ်ဖြည့် ရောင်းလာကြပါတယ်။
ပက်ပ်စီ တို့ ကုတ်တို့ အစား အသီးဖျော်ရည် တွေသောက်လာကြတယ်။
ကလေး ကျောင်းတွေမှာ ဒီလို အချိုရည်တွေ၊ အာလူးကြော်ထုတ်တွေ မရောင်းရတာ ကြာပြီ။
ကျန်းမာရေး ကို ဘယ်လောက် လိုက်စား နေလဲ၊ ဘယ်လို အစားတွေ စားလဲ ပေါ်မှာ Class ကွဲ သွားတာလား?
Class ကွဲနေတာမို့ အသိနည်းသူများ က ကျန်းမာရေး အတွက် ဂရုမစိုက်တာလား?
သူကြီး တို့ရဲ့ အမေရိကားတိုက်ထဲ က အမေရိကားနိုင်ငံ ကြီး မှာ လူများ အဝလွန် လာလို့ Junk Food အစားလျှော့ကြဖို့ နဲ့ ကျောင်း တွေရဲ့ ကန်တင်း တွေမှာ Junk Food တွေ ဖယ်ဖို့ ကန်ပိန်း တွေလုပ်နေတာ မစ်ချဲအိုဘားမား က ရှေ့ဆုံးမှာပါ။
ကျန်းမာရေး ကို အသာထားပြီး ဝင်ငွေ နဲ့ ကြည့်ချင်သေးလား။
ဒီမှာ အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခ တစ်နာရီ ၆ပေါင်ခွဲ လောက် ရပါတယ်။
တစ်ရက် ကို ခြောက်နာရီ အလုပ်ချိန် ထားပါ။
KFC set တစ်ပွဲ ကို ၆ပေါင်ခွဲ နဲ့ ရတာမို့ ကျန်တဲ့ ငါး နာရီ လုပ်စာ ပေါင် ၃၀ ကျော် ကို အိမ်သယ်သွားနိုင်တယ်။
ပေါင် ၃၀ ဆိုတာ စားတတ်ရင် တစ်ပါတ်စာလောက် စားနိုင်တယ်။
တစ်ရက် လုပ်စာ နဲ့ ကလေး တွေခေါ်ပြီး မိသားစု KFC သွားစားရင် တစ်ပါတ် ကို နှစ်ခါလောက် စားနိုင်တယ်။
ဒါ အဆင်းရဲဆုံး ဝင်ငွေ အနဲဆုံး လူ အတွက် ပြောတာနော်။
. မြန်မာပြည်မှာ တစ်ရက် လုပ်ခ သုံးထောင် ကို မနဲ ဈေးဆစ်နေရတယ်။
တစ်နာရီ ငါးရာ ကျပ်။ ကြက်သားကြော် တစ်တုံး တောင် ရနိုင်ပါ့မလား။
တစ်နေ့လုံးစာ သုံးထောင် ပေးတောင် Set တစ်ခု ရနိုင်ရဲ့လား။ သူကြီး ပြထားတဲ့ ပုံမှာတော့ Set တစ်ခု က ၃၅၀၀ တဲ့။
ဒါကို နှိုင်းပြတာ ပါ သူကြီး ရယ်။
လူတန်းစား ကို နှိမ့်ပြီး ပြောစရာ အကြောင်း မရှိပါ။
. မြန်မာပြည်ပြန်တုန်းက ဘာ ဂျန်းရှင်းလဲ တော့ မသိ၊ လမ်းမတော်နားမှာ။
အဲဒီထဲ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ စားတော့ တစ်ပွဲ ကို အနည်းဆုံး ၈၀၀၀ က စတယ်။
. ဈေးကြီးလိုက်တာ လို့ ပြောမိသေးတယ်။
ကိုယ့်ဆီက လို ဝင်ငွေ နဲ့ မပြောလောက်ပေမဲ့ မြန်မာပြည်က ဝင်ငွေ နဲ့ ကြည့်ရင် ဈေးကြီးပါတယ်။
မလှမ်းမကမ်း မှာ အတွဲတစ်တွဲ ထိုင်စားနေတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကြည့်ရတာ ချမ်းသာတယ်လို့ မပြောနိုင်အောင် ကို အတော်လေး နွမ်းပါးပုံရပါတယ်။
သူတို့ စားနေတာ သောင်းလောက်တန်တဲ့ ဆက် လိုမျိုး။
. ပြီးလို့ ထသွားချိန် ကောင်မလေး ရဲ့ ပန်းကန်ထဲ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။
မကြိုက်လဲ ဘာလို့ မှာလဲ၊ မကုန်လဲ ဘာလို့ ပါဆယ်ထုတ်မသွားလဲ၊ (ဒါမှမဟုတ်) အသေးမမှာလဲ တွေးမိသေး။
. နှစ်သောင်းလောက် ဆိုတာ ဘာမှဟုတ်ဘူး ပြောနိုင်တဲ့ သူရှိသလို မိသားစု တစ်စုစာ လုံး ရဲ့ တစ်ပါတ်စာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့ ပိုက်ဆံ နဲ့ သူတို့ စားတာမှန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီလို သုံးလိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံဟာ ကိုယ့်အတွက် ပိုပြီး အရေးကြီးတဲ့ နေရာမှာ သုံးတတ်တဲ့ အသိ မဝင်ရင် သူတို့ ဘဝ ဒုံရင်း မှာ ဘဲ ရှိနေမှာ များပါတယ်။
သူများ တွေ သုံးတာ၊ စားတာ၊ ပျော်တာ အားကျစရာပေမဲ့ မတူနိုင်တာ ကို လိုက်မတုကြစေလိုပါ။
ကိုယ်လုပ်ရမှာက ကိုယ့်ရေရှည် အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ အတွက် မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကိုသွားနိုင်ဖို့၊ မှန်ကန် တဲ့ အမြင်ရှိနိုင်ဖို့ပါ။
ပိုက်ဆံ ကို ဖြုန်းတာ အလကားဝင်နေတဲ့ သူတွေ မှာ အကြောင်းမဟုတ် ပိုက်ဆံ အလကားမဝင်ဘဲ သူတို့လို ဖြုန်းချင်ရင် ဘဝ ပျက်တတ်တာမို့
အသုံး နဲ့ အဖြုန်း ကို ခွဲ သိဖို့ အသိလဲ ရှိသင့်ပါသေးတယ်။
ကိုယ့်ခွန်ကိုယ့်အားမပါဘဲ သူများ ကို မှီပြီး ကြီးပွါးရတာ၊ ကိုယ်မတတ်နိုင်ဘဲ အကြွေးယူပြီး ဟန်လုပ်နေတတ်ကြ တာတွေက ရှက်ဖို့ကောင်းတာ သိကြဖို့လိုတယ်။
ကိုယ့်ဝင်ငွေ ကို သမာအာဇီဝ ရှာပြီး အသုံးကို အတိုင်းအဆသိ ပြီး မလိုတာကို မဖြုန်းတာ ရှက်ဖို့ မလိုပါဘူး။
အဲဒီလို မသိနိုင်ကြလို့ အောက်တန်းလွှာတွေကလဲ ငွေရဖို့ ဘဲ ကြည့်ပြီး မရိုးသားတဲ့ အလိမ်အညာ အလှည့်အပတ် တွေနဲ့။
အထက်တန်းလွှာ တွေ ကလဲ ငွေရဖို့ ဆို သူလဲရ စေ၊ ငါလဲ ရ စေ စိတ်မရှိဘဲ တစ်ဘို့ထဲ ကြည့်ပြီး စာနာစိတ်တွေ ပျောက်လို့။
ဒီတော့ ပြောရရင် မြန်မာပြည် မှာ တံခါးဖွင့်ချိန် ကောင်းတာတွေ ရော၊ မကောင်းတာတွေပါ ဝင်နေတာ မြင်ရမှာပါ။
ဘယ်ဟာ က ကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူး ဆိုတာ တစ်ချို့ ဟာတွေ က မကွဲပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ဟာတွေ က ကွဲပြား သိနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံ ပြင်ပမှာ ဒါတွေကတော့ မကောင်းဘူးဟေ့လို့ သူတို့ အစိုးရတွေ ကိုယ်တိုင် က တရားဝင်ပညာပေး လုပ်နေတဲ့ ဟာ တွေ ကို ကိုယ့်နိုင်ငံ ထဲ မှာလဲ သိစေချင်ပါတယ်။
ဒီလို Junk Food တွေ ကို မစားကြ နဲ့ လို့ မပြောလိုပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အလွန်အကျွံ စားသင့် မစားသင့် လိုမျိုး အပြင် ငွေကြေး တတ်နိုင်ရင်တောင် ကလေး တွေ ကို အမြဲ ကျွေးသင့် မကျွေး သင့် အသိလေး တွေ ထားသင့်ပါတယ်။
. ရွှေပြည်က သူငယ်ချင်း ကလေး တော်တော်များများ over weight လို ဖြစ်နေကြတာ လဲ မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
တိုင်းပြည် ထဲ က လူများ သိဖို့ အဝေးက လူများ ကလဲ အသိဝညာလေး တွေ မျှသင့်ပါတယ်။
အပေါ်စီး ဆရာကြီး/ဆရာမကြီး စတိုင် နဲ့ နှိမ်သလို မပြော ရင် အထဲ က လူ တွေ ကလဲ လက်ခံသင့်တာ လက်ခံ ဖို့ ဝန်လေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဟိုနေ့က ပြောတဲ့ ကမ္ဘာကြီး က ကောင်းတဲ့ ဘက် ကို များလာတယ် ဆိုတာ အနောက်တိုင်း နိုင်ငံကြီး တွေ မှာ မှန်ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် အာဏာရှင်ကြီးစိုး တဲ့ နိုင်ငံတိုင်း မှာ တော့
ထင်ရာစိုင်း သုံးနိုင်အောင် ငွေ ကို အလွယ်ရနေတဲ့ သူများ ရဲ့ အခြေအနေ ကို မပျက်အောင် ပုံစံ မျိုးစုံ နဲ့ အာဏာမြဲစေ နည်း တွေ
သုံးနိုင်တဲ့ သူများ ကို အားကျပြီး မသုံးနိုင်တဲ့ သူများ ရဲ့ အောက်လမ်း က ငွေရှာနည်းတွေ
အဲဒီ နည်း တွေ အကြားမှာ စိတ်ဓာတ် တွေ ပိုပိုပြီး နိမ့်ကျလာတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။
အခုပြောတာ အစားအသောက် ကိစ္စ တစ်ခုထဲ မဟုတ်၊
ပိုက်ဆံပေါသော လူများ ကို ပုံစံမျိုးစုံ နဲ့ မြူဆွယ် ပြီး ကိုယ်နဲ့ ရုပ်ပြစား နေတဲ့ မိန်းမ တွေ များလာ ချိန် ကိုယ်တိုင် ပုခက်မလွှဲချင် တော့ တဲ့ လက်တွေ ထဲ မှာ တိုင်းပြည် ရဲ့ ရင်သွေး တွေ အငုံဘဝ မှာဘဲ ကြွေနေဦးမှာ ပါ။
လိင်ကိစ္စ Sex ပိုင်းတွေ မှာပါ မကောင်း တဲ့ ဘက် ကို လမ်းလွဲ လာတာ မြင်နေရလို့ ပါ။
Middle class ကျောင်းတွေ မှာ ဆယ်ကျော်သက် တွေ အတွက် Sex ပညာပေး လုပ်နေတဲ့ အကြောင်း တွေ ကို ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။
ဒီလို Sex ကိစ္စကို ပစ်စလက်ခတ် တွေးပြီး ထင်တိုင်းကြဲ နေတာ ဟာလဲ Lower Class တွေ မှာ ပိုပြီး ရှိနေတာ လို့ ပြော လို့ ရနေပါတယ်။
. လူဘဝ နေရခိုက် လေး နေချင်သလို မနေရ၊ စားချင်သလို မစား ရရင် လူ့ဘဝ ရတာ မတန်ဘူး ဆိုတဲ့ ( မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ) အစွဲကြီး ကို မဖျောက်နိုင်လဲ ကွကိုယ် စိတ်ချမ်းသာသလို နေနိုင်ပါကြောင်း။
အနောက်တိုင်းက လက်ရှိ ပြောင်းနေတဲ့ Life Style အကောင်း တွေ ကို မသိကျိုးကျွန်လုပ်ပြီး ဒိတ်အောက်နေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဘဝ နေနည်း တွေ ကို ရွှေပြည်ထဲ အဟုတ်မှတ်အောင် ဝါဒ မဖြန့်စေလိုကြောင်း။
Class ကွဲ သည် ဆိုတာမှာ ငွေကြေး အရ တိုင်းတာမှု ထက်
အသိပညာ နဲ့ စမ်းစစ် ဝေဖန်မှု
စိတ် ကို ထိန်းချုပ် နိုင်မှု
အပိုင်း များတွင် ကွဲ သွားခြင်း ဟုလည်း ပြောနိုင်ကြောင်း။
. ပြောချင်တာ တွေ ရှိနေသော်လည်း တော်ပါပြီ လို့စ်။ lol:-))))
အနောက်တိုင်း UK မှာ မပေါ့တပေါ် စကပ်တို တာဟာ သူတို့ ယဉ်ကျေးမှု လို့ ထင်ရင် မှား လိမ့်မယ်။ USA မှာတော့ မသိ။
ဒီနေ့ဘဲ သတင်းပါလာတာ။ ကျောင်း တွေမှာ စကပ် အတို မဝတ်ရဖို့ နောက်ပိုင်း ပိုပြီး တားလာလိမ့်မယ်။
စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အရ အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ Life Style တွေမှာပေါ့။
Khin Latt has written 240 post in this Website..
View all posts by မြစပဲရိုး →	Blog
မြစပဲရိုး says: Print Screen လုပ်ပြီး တင်တဲ့ ပုံက မပေါ်ပါ။
Screen ပေါ်ကပုံ ကို ကင်မရာ နဲ့ ရိုက်ပြီး တင်တဲ့ ပုံက မှ ပေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပုံဝါး နေသည်၊ ခွေးလွှတ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: ပုံက.. အောက်ကလင့်ခ်မှာရှိနေပါတယ်….။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
@QUIL@ says: ခီညားဒို့ နှစ်ယောက်ကို သပ်မဲ…..
နီးဂတခဲန်.. က ဂျော်ရှိ ကိုးကိုးဆေဲး တွေက စုကားတို နိပွန်း အိချိ မိဂျိကဲအဲ့အဲ့…။
kai says: ဂျပန်က.. ကိုးကိုးဆေး(အထက်တန်းကျောင်းသူ)တွေ… စကပ်မတိုရဖို့ကျောင်းမှာတားထားသမို့…အတန်းပြီးတာနဲ့..လမ်းတင် ရှိတဲ့စကပ်ကလေး.. ခါးကနေလိပ်လိပ်ပြီးတင်လိုက်တာ.. တွေ့ဖူး..
သူတို့လေးတွေ.. ပျိုပျိုမေအရွယ်.. ငွေကြေးဖူလုံတဲ့.. ချိုချိုဖေတွေဆီက… အဲဒီလို..အဲလိုတွေနဲ့ငွေရတယ်…။
အဲဒီအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်.. သုံးနိုင်.. ဖြုန်းနိုင်တယ်..။
kai says: .. တမြန်နေ့က.. ဘုရ်ှအငယ်သမ္မတဟောင်းနဲ့.. ဒလိုင်လားမားတို့တွေ့ကြတယ်..
တမြန်နေ့ကပဲ.. မဟနက.. ဆတော်ကြီးယူအက်စ်.. အယ်လ်အေကြွလာ.. မြန်မာတွေနဲ့တရားဟောနေပုံတွေ့တယ်..
လူတွေထီးဖြူဆောင်း.. ၀ိုင်းဝန်ပူဇော်နေပုံလေး.. အသက်အောင့်ပြီးသိမ်းထား..။
မြန်မာတွေ အတန်းအစားခွဲတာ.. (အဲဒီဘာသာရေးအယူမှားတွေကြောင့်).. ဟိန္ဒူဟောင်းအယူနဲ့ဆင်ပြီး.. ဇတ်ခွဲတယ်လို့ပြောရင်ပိုမှန်မလားပဲ..
ဆင်းရဲသားဆိုတဲ့အထဲ… ဇတ်ခွဲနှိမ်ချ.. နိမ့်ကျတဲ့သဘောပါ…။
အရီးလတ်ရဲ့ အနောက်နိုင်ငံက..(အများစု) လူတွေအဆင့်အတန်းခွဲတာတွေနဲ့မတူရေးချမတူ….။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘာပြောပြော ဒီရောက်တယ် ညော်…!!!
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ကျောက်စ်ကတော့… ဘယ်ဆိုင်မှာစားစား စားမကုန်ရင် ထုပ်ပြီးပြန်သယ်လာဖို့ ဝန်မလေးဘူး…
ကိုယ့်ပိုက်ဆံ ချွေးနှဲစာနဲ့ဝယ်စားတာ ၊ ပြန်သယ်ရတာ ရှက်စရာလို့ မမြင်ပေါင်…
အဟိ… စကတ်တိုတဲ့ ကိစ္စကတော့ ဒီမှာအဆန်းတကျယ်မဟုတ်…
Subway လှေခါးအတက်တွေဆို… ကိုယ်တွေက ခေါင်းငုံ့ထားရတယ်… ခွီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .ကျုပ်လည်း ကိုကျောက်စ် လိုပဲ..ကျန်တာသယ်လေ့ရှိတယ်ဗျ..မရှက်ပေါင်ဗျာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: ၂၀၀၀၀ ဆိုတာ သများ တစ်ပတ်သုံးလို့ရတယ်… ကိုယ့်ဘာသာကို ချက်စားမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ… အာ့ကြောင့် junk food တွေ သွားစားမယ်ဆို အနည်းဆုံး ၁၀၀၀၀ လောက်ကုန်တယ်.. ဒါမျိုးဆို လခထုတ်ပြီးပြီးချင်း သွားစားပလိုက်တယ်… ကိုယ့်နိုင်ငံက အတော်လေးခေတ်နောက်ကျတာကို နယ်တွေကြည့်ရင် အတော်သိနိုင်တယ်… နယ်ဆိုတာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သိပ်ရနိုင်တာ.. ဒါပေမယ့် သူတို့က ခေါက်ဆွဲခြောက်ပြုတ်စားရတာ… ရယ်ဒီမိတ်တွေ ဝယ်ရတာကို ခေတ်မီတယ်လို့ ထင်နေကြတယ်… တော်ရုံတန်ရုံ ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တာမျိုးတောင် ဒိတ်အောက်နေပြီ… ရယ်ဒီမိတ်လေး ဝယ်လိုက်တာမှ ခေတ်မီတယ် ထင်နေကြတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: (မကြိုက်လဲ ဘာလို့ မှာလဲ၊ မကုန်လဲ ဘာလို့ ပါဆယ်ထုတ်မသွားလဲ၊ (ဒါမှမဟုတ်) အသေးမမှာလဲ တွေးမိသေး။
မပြည့်တဲ့အိုး ဘောင်ဘင်ခတ်တယ် လို့ ပြောရင် ရိုင်းရာကျမလား မသိဘူး။
လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးမှာ အစားကို ကုန်အောင်စားရင်ပဲ ငတ်ကြီးကျသလို၊ ရှက်စရာကောင်းသလို ထင်ပြီး တပိုင်းတလက်စနဲ့ ချန်ထားတဲ့အကျင့်ရှိကြတယ်။
အဲဒါအပြင် ရေဆိုလည်း အလွယ်တကူသွန်ပစ်ပြီး ဘာကိုမှတန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်းမသိကြတော့တာ။
ထိုင်ဝမ်ရောက်တုန်းက စိနတွေ စားတဲ့နေရာမှာ ဒီကလူတွေနဲ့ တခြားစီပဲ စားနိုင်ကြတာ သတိထားမိတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့ဆီမှာ အ၀လွန်တာ သိပ်မတွေ့မိဘူး။
နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ စနစ်တကျ စီစဉ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ကြတယ်။
ဉာဏ်ရည်မြင့်မားပြီး စားသောက်နေထိုင်မှုလူမှုအဆင့်အတန်းတွေလည်း မြင့်ကြတာ အားကျစရာကောင်းတယ်။
သဂျီးနဲ့ မလတ်ကြားက လူတန်းစား ခွဲခြားမှုကိုတော့ သူ့အတွေးနဲ့သူ လို့ပဲ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: လော့ကျတဲ့အိမ်က..မြန်မာတွေကတော့.. စားသောက်ပြီး ကျန်တာ အိမ်ပြန်မထုတ်သွားရင်.. ငပေါလို့တောင်ထင်မယ်…
အကုန် ထမင်းဖြူလေး နည်းနည်းပိုတာကအစ..ထုတ်ယူပြန်..။
အနည်းဆုံးတော့နောက်တနေ့ မနက်စာ ချက်ရသက်သာသပေါ့..။
ဒီနေရာမှာ ဂျပန်တွေကတော့ အိမ်ပြန်မထုတ်..။
မှာထားပြီး အကုန်မစားရင်.. စိတ်ဆိုး….။
စားသောက်ခရှင်းရင်လည်း.. တပြားစေ့လေးကအစ ပြန်အမ်းတာသေသေချာချာသိမ်းယူသွားပြီး.. တစ်ပ်လည်းမပေး…။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1880
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: သဂျီးပြောသလိုပါပဲ.. ဂငယ်တွေက ထမင်းစေ့ကျန်တာမကြိုက် မကုန်တာမကြိုက်တော့
ကျွန်တေ်ာ့က စိန့်ပိုင်ဆိုင်တွေမှာ တာဘဲ နဲ့ နိုးမိ ဟိုးဒိုင် စားတဲ့ ပရိတ်သတ်အတွက်တော့
ဘာမှမကျန်အောင် စားရင်း စားရင်းနဲ့ ပေါင် ၂၀၀ ကျော်လာတာဘာဘဲ ဗျာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1880
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: မြန်တျန့်ကတော့ ကမ်ဘာမှာ လှူဒန်းစား ခွဲခြားမှု အမြင့်ဆုံးပါ တယ်ဆိုရမယ်။ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2394
aye.kk says: မလတ်ရေ
၊ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝနဲ့ဘဝခြင်းအတော်ကွာဟကွားခြားနေတာ လက်တွေ့ခံစားမိလိုက်ရပါတယ်။
ငယ်ငယ်ကအလယ်တန်းကျောင်းသူဘဝတုန်းကစကဒ်ဝတ်ရင် အစ်ကိုကဆူတယ်။ခုတော့အစ်ကိုရဲ့ သမီးလေးက
အလေ့အထ အမူအကျင့်တွေအရ ကွဲပြားခြားနားသွားတိာု ကိုယ်တိုင်ကလက်ခံလို့ စိတ်ကထားတတ်သွားခဲ့ပါတယ်။။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 462
ကူမားရ် says: အရီးရေ
ရင်ထဲမှာ ရှိနေခဲ့တာ သိမ်းထားပြီး ပြောမထွက်ရက်ခဲ့တဲ့ ဗေတားဆူးတစ်ခုကို အရီးက ဒီပိုစ့နဲ့ နှုတ်ယူပေးလိုက်တာပါပဲ
မြန်မာလူငယ်တွေ ဈေးကြီးပေးရတဲ့ ကော်ဖီဆိုင် မုန့်ဆိုင်တွေ မှာ ပိုက်ဆံတွေအများကြီး အကုန်ခံစားသောက်နေတာကိုမြင်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူးဖြစ်နေခဲ့တာ
သူတို့ကတော့ဒါစားဘူးမှ ခေတ်မှီမှာ လိုဖြစ်နေပေမယ့်
သူများတွေဆီမှာ ဘာမှ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကို မပြောပြရက်ဘူး အရီးရှင်းပြသလိုပဲ ချမ်းသာတဲ့လူမှစားရမှာလား ငါတို့လည်းလူပဲ အတန်ူအစားမခွဲခြားနဲ့ဆိုတဲ့ မသိမာန နဲ့ အဆဲခံရမှာကြောက်လို့
ခုတစ်လောကပေါ်တဲ့ KFC မှာ တန်းစီတိုးပြီးစားနေတာမြင်ရ တော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ဒီကိတ်စပြောဖြစ်ခဲ့တယ်
အရီးလို စေ့စေ့စပ်စပ် နဲ့ ထောင့်စေ့အောင် ပြန်မရှင်းတတ်တော့ ဝင်လာမယ့် ထိုးနှက်မှုတွေကို ကျောက်ပြီး ဗေတား ဂဇက်မန်ဘာမပီသ စွာ မရေးရဲ မထွက်ရဲခဲ့တာ ကို ရှက်ရွံ မိရင်း အရီးကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဆိုင်သွားစားရင် ကုန်အောင်စားတယ် မကုန်ရင် ပါဆယ်ဆွဲ တယ်
ဒါပေမယ့် လက်နဲ့ မသယ်ရတာများပါတယ်
လူတန်းစား ခွဲ ခြားမူ့ ဆိုတာကတော့ ရှိနေမှာပါဘဲ
ဒါပေမယ့် ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မူ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးခွဲခြားတာကတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မြန်မာပြည်လူတန်းစားခွဲခြားမှုက လုပ်တဲ့အလုပ် အဆင့်တန်းနဲ့ သိပ်မဆိုင်လှဘူး။ ဘာမှန်းကို မသိပါဘူး။ အရာရှိမနဲ့ စာရေးမ ထိုင်ခုံနေရာချင်းတော့ ဘယ်တူပါ့မလဲနော်။ ကိုယ့်ကြိုးစားမှုနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ နေရာမှာ နေရမှာပေါ့။ စာရေးမက အရာရှိမ ထိုင်ခုံပေါ်သွားထိုင်လို့ ဘယ်ရမလဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာပြည်လူတန်းစားခွဲမှုက ဘယ့်နှယ့်ကြီးမှန်းကို မသိဘူး ။ ရှိကိုရှိနေတယ်။ အချင်းချင်းတောင် ခွဲကြတာ။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မတူသလို မတန်သလို အဲလိုမျိုး ။ သြော် ဆိုတဲ့စကားလုံးလေး တစ်လုံးကိုတောင် အဓိပ္ပါယ်အများကြီးထွက်အောင် ပြောတတ်တဲ့လူမျိုးတွေ။ .ချွေတာရေးနဲ့ မိမိဘ၀ကိုတည်ဆောက်တာတွေကို တော့ ကြိုက်ပါတယ်။ မြို့ပေါ်မှာ ရေခဲမုန့်လေး လက်တွန်းလှည်းနဲ့ ပတ်ရောင်းတဲ့ လူက တိုက်ဆောက်လိုက်တယ်။ ရေသန့်ပို့တဲ့ ကောင်လေးက ထော်လာဂျီ ၀ယ်တယ်။ ဘာ ၂လုံးမှ မထိုး၊ ၁လုံးလည်း မလုပ်။ တခြား အပိုအလျှံရအောင်လည်း ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ဘဲ အဲဒီအလုပ်တစ်ခုထဲနဲ့ အောင်မြင်နေတာပဲ။ ပညာလည်း မတတ်ဘူး။ အဲဒါကျတော့ ဘယ်လိုပြောမလဲ။ .မျှစ်တောင် ပြောရရင် သူတို့ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တိတ်တဆိတ် ရှက်မိပါတယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသက မေတ္တာပို့မှာ အထင်သေးခြင်း အချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ ဆိုတာ ကြားဖူးကာစ သိပ်နားမလည်ဘူး။
တဖြေးဖြေးနဲ့ အသက်ကလေးရလာတော့မှ လူတွေတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စတွေ့တာနဲ့ ဘယ်လိုလဲဆိုပြီး ကြည့်တတ်ပြောတတ်တာတွေကို သတိထားမိလာတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း (အော်ပီကျယ်ကာတွန်းမှာလည်း ပါသလို) ကိုယ့်ကိုသူများက ဘယ်လိုမြင်တာ အရေးမကြီးဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုမြင်တာက အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားရင်း tension တွေ အတော်များများ လျော့သွားတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: မားကက်တင်းမှာတော့ လူတန်းစားခွဲခြားပီး Target Consumer သတ်မှတ်မှပဲရဒယ်…. နောက်ပိုင်း လူကြားကောင်းအောင်၊ အထက်တန်းလွှာ၊ အောက်တန်းလွှာခေါ်မကောင်းလို့ SEC (Social Economic Class) A, B, C စသဖြင့် ပြောကြတယ်…
အထက်တန်းလွှာမှာတောင် Old rich နဲ့ New rich ရှိသေးတယ်… မိဘဘိုးဘွားလက်ထက်ထဲက ချမ်းသာသူနဲ့ ခရိုနီသထေးတို့လိုပေါ့..
အော့… အနော် လူတန်းစားခွဲခြားတာတော့ တော်တော်လေးလုပ်ရတယ်လို့စ်…. ဟီးးးးး ထင်ရာမြင်ရာ ၀င်ပြောတာ…
စတာပါ.. စတာပါ… ဆက်ပြောဂျပါ… ဆေးရိုးလေးနဲနဲ ၀င်ရောင်းကျိဒါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Alinsett @ Maung Thura says: လူကြီးတွေ ပြောတာတွေကို
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 138
​ဒေါ် လေး says: တကယ်တော့ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေကို ငယ်ကတည်းက လိုက်နာရမယ့်
စည်ကမ်း တွေကို သင်ပေးသင့်တယ်
သင်ပေးပြီးရင်လဲ လိုက်နာမလိုက်နာ ပြန်ကြည့်ပြီး အပြစ်ပေးသင့်ပေးရမယ်
လူသားအရင်း အမြစ် ကို သေချာဂရုမစိုက်တော့
လူတန်းစားခွဲချားမှုတွေ ကပုံစံမကျ ကွဲထွက်ကုန်တယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.
In & Out	Register	Log in
WordPress.org	The Democracy Book and Teacher’s Manual	"The Democracy Book" - Dr. Jerry Dean Epps ( မြန်မာပြန်)
How to WriteaPost	ဖတ်ပါ၊..မှတ်ပါ၊..ပြီးမှတင်ပါ..။
1. Writing Guidelines
6. ဖုန်းဖြင့် ပို့စ်တင်လျှင် ၁
7. ဖုန်းဖြင့် ပို့စ်တင်လျှင် ၂
8. စာရေးသူ နာမည်နဲ့ ရှာလိုလျှင်
Do & Don’t (Rules)	1. မိမိစာနှင့် အနီးစပ်ဆုံးCategory (တခု)ကိုရွေးချယ်၍ပို့စ်တင်ပါ။ ((Copy/Paste Category)သည် ရှေ့မျက်နှာတွင်ပေါ်မည်မဟုတ်။) Tagထည့်ပါ။ Tagကို စာတလုံးစီကော်မာခံပြီးမှထည့်ပါ2. Titleကိုတိုတိုရေးပါ။ စာမူရေးသားရာတွင် စာလုံးများကို Spaceခြားပါ။3. မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကို သတိထားစစ်ဆေးပါ။ စာလုံးပေါင်းစစ်ရန် 4. အခြားမီဒီယာ၊ Websiteများ၏ သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများ၊ forwarded email မှစာများ (မူရင်းအစစ်အမှန်ကို ညွန်းဆိုခြင်းမရှိပဲ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်မထည့်ပဲ)တိုက်ရိုက်ကူးတင်ခွင့်မရှိ။5. သတင်း၊စာမူတွင် မှီငြမ်းကိုးကားခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်းပါက မူလSourceနှင့် မူရင်းစာတပိုဒ်ကိုဖော်ပြရန်။6. လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး၊ အသားအရောင် ခွဲခြားမုန်းတီးမှုဖြစ်စေသော စာများမတင်ရ။ 7. ဘာသာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော စာများအား ပွိုင့်မပေးပါ။ 8. ကိုယ်တိုင်ရေးစာ မဟုတ်သည်များကို ပွိုင့်မပေးပါ။ 9. မည်သူ့ကိုမှ မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မှ ရိုင်းစိုင်းစွာဆဲဆိုခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရ။ 10. မိမိတင်သည့်စာကို စာမူရှင်(တင်သူ)မှ တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး အယ်ဒီတာ၊ အဒ်မင်တို့မှ တာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
- စာမူရှင်သည် မိမိစာအပေါ်ကော်မန့်ပေးသူများအား ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူဖြစ်ရမည်။
11. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်စေသော ပို့စ်၊ကော်မန့်များကို ကာယကံရှင်မှ အယ်ဒီတာထံ ကန့်ကွက်စာအီးမေးလ်ပေးပို့ပြီး ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုစေလိုသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပို့စ်တင်သူအား ပွိုင့်၁၀၀၀ နှုတ်ပါမည်။
- မင်န်ဘာတဦးသည် တရက်လျှင်ပို့စ် ၂ခုထက်ပိုမတင်ရ
- တောင်းပန်စာ၊ ကျေးဇူးတင်လွှာ ကြော်ငြာ တိုင်စာများ ကိုဖိုရမ်တွင် ရေးကြပါရန်။
12. Post/Comment တို့ကို စာဖတ်သူတို့အတွက် အကျိုးရှိ/ကျန်ရစ်စေမည့် စာများသာရေးကြပါရန်။ အကြောင်းအရာတူသတင်းကို အရင်တင်ထားသူအောက်တွင်သာ ပေါင်းရေးကြပါရန်၊
- Member တဦးသည် အခြားMemberအပေါ် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ.. မှတ်ချက်/ထင်မြင်ချက် ပေးရန် လုံးဝ(လုံးဝ)အခွင့်မရှိ....
Comments By Postနေ့ ချင်းပြန်သွားလို့ရတဲ့ အေးချမ်းလတ်ဆတ်မှုကိုအပြည့်အ၀ခံစားရမယ့် ရွှေပြည် - Thint Aye Yeik - ko sixဘာရယ်ဟုတ်ဘူး... - Thint Aye Yeikမြေပုံထဲမှာ မပါချင်တဲ့လမ်း - Thint Aye Yeik - kaiကျွန်တော်နဲ့ Dead Body(0:2) - kai - Ma Eiမတူညီသော အတွေးအမြင်များ - ko six - ကျော်လွင်ဖြိုးအဝင်ကော - ko six - Mr. MarGaအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - ko six - kaiအားနာလွန်းလို့ ပါ - ko six - တောတွင်းပျော်သူမတူတဲ့ မိန်းမသားများအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် - surmi - ဦးကြောင်ကြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလေး...လာအိုသို့ - Tawwin Pan - Foreign Residentအေးခဲနေသောအနောက်နိုင်ငံကနိုင်ငံများ........... - Tawwin Pan - Thint Aye Yeikကျွန်တော်နဲ့ Dead Body (0:1) - ကျော်လွင်ဖြိုး - kaiချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား - aye.kk - ဇီဇီဇလုံတောင်ဘုရား မရောက်ဖူးသေး သူများနှင့် ဘုရားသမိုင်း - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်ရေတွေကနိမ့်ရာကနေ မြင့်ရာကိုစီးဆင်းနေတဲ့နေရာ - Thint Aye Yeik - Mr. MarGaဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမယ့် ၂၁ရာစု၏တိုးတက်လာသော အသုံးဝင်နည်းပညာများ - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်ကဗျာဆန်ဆန်လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့...ကဗျာဝကမ်းခြေ (or) အပျိုစင်ကမ်းခြေ - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်"ပြည့် " - Thint Aye Yeik - aye.kk" ဟိုမှာဒီမှာ " - Thint Aye YeikPromotion လေးတွေလာပါပြီ............................... - Foreign Resident - Thint Aye Yeikဖုန်းတွေ၊နာရီတွေပေါ်မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့(11:11)ရဲ့အဓိပ္ပါယ် - Mr. MarGa - Mr. MarGa"ေ ကာက်ရိုးမီး" - weiwei - kaiကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကိုနေ့ ချင်းပြန်စရိတ်ငြိမ်းနဲ့ သွားကြမယ် - kai - etoneကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ၈ ဦး - kai - ko sixခရီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ထုတ်ပိုးနိုင်ဖို့ သိထားရမယ့် အချက် (၁၅) ချက် - သျှားသက်မာန် - Thint Aye YeikMarijuana - ဆေးခြောက် - kai - ဇီဇီစာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၃)- အနုပညာလွတ်လပ်ခွင့် - Thint Aye Yeik - ko six''ဤ''ကို ခပ်လွယ်လွယ်--ကျွဲချင်သူတွေ များလွန်းတော့လည်း... - Thint Aye Yeik - ဇီဇီဖွင့်မရတဲ့ ဦးနှောက် - ko six - ko sixCategory	Arts & Humanities
Classifieds, Personal Ad.
Complaint / Claim
Computer & Cell Phone
Software & Links
Food, Drink & Recipes
Best Web Awards
Opinion – Op-ed
Opinions & Discussion
Other – Non Channelized
Aung San/Aung San Suu Kyi
Sciences & Resources
Aha! Jokes, Satire
Community & Society
Thakhin: CJ Only
Myanmar Font	Zawgyi Myanmar font Installer for Windows XP, Vista, 7, 8 (32bit, 64bit) Free Download from the following link.
True Type Fonts
ကျပ်တသိန်းသို့ Top 10alinsett (95978 Kyats )Anzartone (95532 Kyats )kyeemite (91703 Kyats )weiwei (83430 Kyats )SP (80986 Kyats )padonmar (76894 Kyats )blackchaw (76343 Kyats )Foreign Resident (59074 Kyats )monmon (58594 Kyats )Northern Onestar (56676 Kyats )FB	FB
etone ဘ၀ တစိတ်တပိုင်း
i got from my mail. .
တာဝတိံသာမှ အက်ဆေးများ
မှီ အမှတ် တရ
မောင် ခင် မင် (ကျွန်းချောင်း)
Myanmar SEO Service
Singapore debt collector
Tour Operator in Myanmar
သံလွင်အိပ်မက် : Thanlwin Ainmat
BBC News – Burma
Burmese – Radio Free Asia
The Irrawaddy news magazine, Burma, Myanmar, Southeast Asia
The Myanmar Post Global
The Voice Weekly
VOA News – News and Features on Burma.
The Network of Myanmar American Association (NetMAA)